Fanampiny vaovao amin'ny andian-dahatsoratra Bentley Institute: Inside MicroStation CONNECT Edition - Geofumadas
Jolay, 2020 AutoCAD-Autodesk, Fampianarana CAD / GIS, Engineering, IntelliCAD, Microstation-Bentley
EBentley Institute Press, mpanonta boky boky manara-penitra sy boky momba ny matihanina amin'ny fampandrosoana ny injeniera, ny maritrano, ny fananganana, ny asa, ny vondrom-piarahamonina geospatial ary ny fanabeazana, dia nanambara ny fisian'ny andian-dahatsoratra vaovao mitondra ny lohateny "Ao anaty fanoratana MicroStation CONNECT Edition" , efa vita pirinty izao eto ary toy ny boky elektronika ao www.ebook.bentley.com
Ny seta misy ny laharana telo dia mifantoka amin'ny fampivelarana ny fahazoana mafy ny fototra iorenan'ny MicroStation ary manaraka ny fomba fanao tsikelikely izay misy fanazaran-tena sy ohatra tena misy amin'ny sary. Ireo boky sy gazety dia manome toromarika ny mpamaky amin'ny fampiasana ny fototra famoronana 2D an'ny MicroStation ary mametraka ny fototry ny fianarana mandroso. Ny andiany dia hita amin'ny Amazon Kindle (boky I, II, ary III) sy Apple (volume I, II, ary III). Ny andian-dahatsoratra boky dia fitaovam-pianarana mahery sy torolàlana ho an'ny mpianatra, ny vao manomboka ary ny manao fampiharana.
Ny andiam-boky dia maneho ny tombony azo avy amin'ny fampiasana CONNECT Edition ary miresaka momba ny fiasa amin'ny MicroStation CONNECT Edition, ao anatin'izany ny fahaiza-manao CAD vaovao sy ny heriny ary ny fahaizany mandinika tsara, mamolavola, manoratra, ary mamantatra ireo endrika be mpahalala amin'ny karazana sy mizana rehetra. . MicroStation CONNECT Edition dia ho an'ireo matihanina miasa manerana ny taranja amin'ny tetik'asa fotodrafitrasa isan-karazany.
“Faly izahay manolotra ity lohatenin'ny Bentley Institute Press hatry ny ela ity, izay hanampy ireo injeniera amin'ny famokarana faobe amin'ny vokatra rehefa miasa miaraka amin'ny MicroStation. Ireo manam-pahaizana avy any Bentley, Samir Haque, Smrutirekha Mahapatra, ary Shaylesh Lunawat dia namory ny traikefa niainany sy lesona nianarany nanoratra ireto boky telo ireto. Miandrandra aho fa ny mpamaky rehetra ity andiany ity dia afaka hampitombo ny fahaizany mikarakara ny MicroStation CONNECT Edition ary hanatsara ny fikarakarana azy amin'ireto boky ireto. ” Vinayak Trivedi, filoha lefitra ary talen'ny Global, Bentley Institute
Volume I dia kendrena amin'ireo mpampiasa mila mahafantatra ny fototry ny rindrambaiko ary manazava ny fomba fananganana ny tontolon'ny sary. Volume II dia mitarika ny mpamaky amin'ny alàlan'ny famoronana singa sy fanovana ireo entana amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao isan-karazany. Volume III dia manolotra ny fizotran'ny asa mandroso toy ny famoronana sela sy ny fametrahana azy, ny fanoritana an-tsary, ny fanondroana toerana, ny firafitry ny takelaka ary ny fanontana.
Samir Haque dia injeniera sy siantifika amin'ny ambaratonga biolojia, biokimia, injeniera elektrika ary ara-batana. Nanomboka tany CAD izy dia mpikaroka ao amin'ny UCLA, izay nampiasainy MicroStation namolavola ny faritra 3D ho an'ny fanandramana amin'ny sidina habakabaka ho an'ny fandalinana ny fizika hozatra ary ny fiarovana ny hozatra. Haque dia nampiasa ilay rindrambaiko hanoratana ny atidoha amin'ny 3D ao amin'ny Brain Research Institute. Tao anatin'ny 23 taona lasa izay niaraka tamin'i Bentley, nanofana mpampiasa an'arivony tao MicroStation i Haque ary nanoratra boky maromaro momba ilay rindrambaiko. Haque amin'izao fotoana izao dia miandraikitra ny fampandrosoana ny PowerPlatform, mitarika ny ekipa fitantanana ny vokatra sy ny antoka momba ny kalitao.
Shaylesh Lunawat dia nahazo ny mari-pahaizana Bachelor of Engineering avy ao amin'ny University of Pune. Izy dia nanomboka niasa tamin'ny asa fanamboarana fitaovana, nialoha ny niasa tao Bentley nanomboka tamin'ny taona 2008 ka hatramin'ny 2019 ho mpiandraikitra ny fanoratana ara-teknika. Amin'ity toerana ity dia tompon'andraikitra tamin'ny famokarana boky isan-karazany ao amin'ny MicroStation sy ny fampiharana Bentley hafa i Lunawat.
Smrutirekha Mahapatra dia nanatevin-daharana an'i Bentley tamin'ny taona 2016 ho mpanoratra teknika ary nitarika ny taratasim-pamokarana PowerPlatform. Talohan'ny nidirany tao Bentley dia arsiteky niaraka tamin'ny orinasa isan-karazany i Mahapatra tamin'ny famolavolana trano marika, trano fivarotana ary hopitaly. Nandritra ny asa maritrano nataony dia nampiasa fitaovana CAD isan-karazany amin'ny fanaterana tetikasa izy. Mahapatra nahazo mari-pahaizana AA amin'ny fitantanana angovo avy amin'ny Kirsch Center for Studies ny tontolo iainana.
Previous Post«Previous Esri namoaka boky smarter Government Workar avy amin'i Martin O'Malley
Next Post Vexel dia nandefa ny UltraCam Osprey 4.1manaraka »